यो हो बलात्कारी सहर, जहाँका एक तिहाई पुरुष बलात्कारी छन् - www.kchhakhabar.com
सोमबार, भाद्र ३०, २०७६
यो हो बलात्कारी सहर, जहाँका एक तिहाई पुरुष बलात्कारी छन्
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०६, २०७५ समय: ९:४७:०८
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्गस्थित डिपलुस्ट सहरलाई दुनियाकै खतरनाक सहर भनिन्छ । त्यहाँ महिलाहरुमाथि बलात्कार हुनु सामान्य कुरा हो । हालै बीबीसीसँगको कुराकानीमा उक्त सहरका दुई युवकहरुले आफुले अहिलेसम्म कैयन् महिलाको बलात्कार गरिसकेको डरलाग्दो खुलासा गरे । यसो भनिरहँदा उनीहरुको अनुहारमा कुनै अपराधबोध थिएन ।
आफ्नो नाम गोप्य राखेका ती युवकले आफ्नो बलात्कार कर्मको कहानी बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘जब महिलाले घरको ढोका खोल्छन् तब हामी घरभित्र घुस्छौँ र आफ्नो चक्कु निकाल्छौँ । महिला चिच्याउन थाल्छिन् । हामीले मार्ने धम्की दिएर चुप गराउँछौँ । अनि ओछ्यानमा लगेर बलात्कार गर्छाैं ।’
ती दुई युवकमध्ये एकजनाले त यस्तो खुलासा गरेकी उनले त्यहाँ भएका आफ्नै साथीकी गर्लफ्रेण्डलाई नै बलात्कार गरेका छन् उनकै अगाडि । एक अध्ययन अनुसार उक्त सहरका हरेक तिनजनामा एकजना पुरुषले कम्तिमा एकपटक महिलाको बलात्कार गरेका छन् । यो संख्या यहाँको जनसंख्याको ३८ प्रतिशत छ । कतिपयले त एउटै महिलालाई धेरै पटक बलात्कार गरेका छन् । विवाहित र बच्चाबच्ची भएका महिलालाई समेत उनीहरुकै घरमा बलात्कार गर्ने गरिएको छ । महिलाहरुलाई उनीहरुकै लोग्नेका अगाडि बलात्कार गरिन्छ ।
गतवर्ष डिपस्लूटमा बलात्कारका ५ सय उजुरी दर्ता भए । तर कुनैपनि उजुरीमा कानूनी कारवाही भएन । बलात्क्ार मात्र होइन अन्य अपराधमा पनि त्यहाँ कानूनी कारवाही निकै कम हुन्छ । यो सहर गरिबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको छ । अझ महिलामाथि हुने अपराध र बलात्कारको संस्कृतिले यहाँको आर्थिक अवस्थालाई झनै जर्जर बनाइदिएको छ ।
लिंग कुहिएर झरेपछि वृद्धको मृत्यु
२९ साउन, काठमाडौं । अल्सर रोगको कारण लिंग कुहिएर झरेपछि भारतको लखनउमा एक ८२ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको छ । वृद्धले आफ्नो...
पत्याउनुहुन्छ ? एउटै आलूको मूल्य १२ करोड रुपैयाँ !
काठमाडौं, २२ साउन । एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफरले आइरिस आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । केबिन एबोसले ...
मरेको १० दिनपछि महिलाले जन्माइन् बच्चा
१० दिनअघि मरेकी महिलाको अन्त्येष्टिका लागि लैजाने क्रममा मानिसहरु तब अचम्ममा परे जब महिलाको लास राखिएको कफन खोलियो । दक्...
अनौठो पर्व: बलेको आगोमा दौडिने, ज्वालामूखीमा अन्न फ्याँक्ने
यहाँ दिइएको तस्वीर इण्डोनेसियाको एक विशेष पर्वको हो । जसको नाम हो यादन्या कासदा । यो त्यहाँको विशेष पर्व हो ।यो पर्वमा ग...
किन जलाइयो १३ अर्बमा ब्राण्डेड कपडा ?
बर्बरी ब्राण्डका कपडाको बारेमा त सुन्नुभएकै होला । यो ब्राण्डका कपडा लगाउनुभएको पनि होला । ट्रेन्च कोट, चेकवाला स्कर्फ त...
जन्मियो ३ सय ७५ ग्रामको बच्चा
सोसल मिडियामा हालै एक खबरले तहल्का मच्चाइरहेको छ । भारतमा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसियाकै सबैभन्दा सानो बच्चा जन्मिएको छ...